Sida Loo Sameeyo Ubax Ku Daabacan Waraaq Kariid | Farsamada gacanta
Sida looga sameeyo ubax ka sameysan warqadda loo yaqaan 'crepe paper'
Irene Gil | | Farshaxanada, Xirfadaha waraaqaha
Wuu soo dhowaanayaa Maalinta Jacaylka, Waqti aan dhammaanteen ka wada roon nahay jacaylka, xiisaha u qaba la kulanka asxaabta, qoyska iyo lamaanaha.
Ma jiraan wax ka qurux badan bixinta wax aan annagu iska samaysanay, sababtaas darteed ayaan maanta kuu keenay a cashar si loo sameeyo ubax xaashi qurux badan kariin loo isticmaalo siinta iyo qurxinta.
Way iska jaban yihiin oo waa sahlan yihiin in la sameeyo markaa bal aan aragno tallaabo tallaabo:
1 Qalabka loo sameeyo ubax warqad ah:
2 Tilmaanta sameynta ubaxyada warqadda ah
2.1 1 Tallaabo:
2.2 2 Tallaabo:
2.3 3 Tallaabo:
2.4 4 Tallaabo:
2.5 5 Tallaabo:
2.6 6 Tallaabo:
2.7 7 Tallaabo:
3 warqad ubax ah
Qalabka loo sameeyo ubax warqad ah:
Waraaqda loo yaqaan 'Crepe paper' ee ku jirta midabka la doonayo, waxaan doortay midab casaan ah, maaddaama ay noo qaadayso jacaylka, ku habboon Maalinta Jacaylka Haddii aadan haysan warqad sireed, halkan waad ka iibsan kartaa midabka aad ugu jeceshahay.
Ribbano midabbo isku dhafan ah.
Badhamada, maqasyada iyo xabagta doorbidayaa in silikoon.
Tilmaanta sameynta ubaxyada warqadda ah
Waxa ugu horeeya ee aan sameyno waa jar jaranjarada, dhowr lakab oo warqadda ah.
Markasta oo lakabyo badan leenahay, ayaa ubaxkeennu sii hubaysanayaa.
Hal dhamaadka fagaaraha, waxaan bilaabaynaa inaan laab sida zig zag, oo isku haysa dhammaan lakabyada.
Waa inuu noqdaa sida aan ku aragno sawirka hoose.
Waxaan ku daboolnaa siligga cajalad cagaaran, adoo adeegsanaya xabagta si aysan hubka nooga dhigin.
Cabirka siliggu wuxuu kuxiranyahay cabirka ubaxayaga, waa inuu noqdaa mid u dhigma.
Hadda, waxaan ku dhejineynaa fiilada midigta kala badh warqadda, adoo riixaya aad u adag, sida aan ku aragno sawirka hoose.
Waxaan bilaabaynaa inaanu furinno taranka, waayo taasi way kufilan tahay si taxaddar leh u kala saar lakab kasta oo warqad ah, oo isku dayaya inuu helo qaab wareegsan.
Waa inaan u ekaano sida sawirka hoose:
Waxaan bilaabeynaa qeybta ugu qosolka badan, taas oo ah adeegsiga mala-awaalka, qurxinta.
Xaaladdan oo kale waxaan isticmaalay badhamado si aan uga dhigno xarunta ubax wanaagsan.
Kadib sidoo kale, way ku qurxin karaan xargaha iyo badhamada.
Tani waa sida ay u ekaan laheyd:
Ubaxyadan, way samayn karaan miisaska, qurxin miisaska oo hadiyado u bixi.
warqad ubax ah
3 FIKRAD si aad ubax uga sameysatid CARFTS-kaaga
Waxa kale oo aad abuuri kartaa noocyo kala duwan oo ah ubax xaashi ah iyada oo isla nidaamkan adigoo si fudud u beddelaya goynta dhammaadka waraaqaha loo yaqaan 'accordion paper'. Sawirka soo socda waxaan ku tusayaa seddex kala goyn oo kala duwan kuwaas oo siin doona dhameystir kala duwan ubaxyadaada.
Dhammaadka ku goo goos gooska ah si geesaha fiiqan ay u soo baxaan, haddii aad sameysid wax yar oo ganaax ah waxaad helaysaa carnation, haddii aad ka tagtana iyaga oo qalooca ubaxaagu wuxuu u ekaan doonaa sida ubax.
Xusuusnow in markii laba jibbaarane, ay sii weynaadaan ubax warqad ah, iyo inta jibbaaran ee aad isticmaasho, wey sii weynaan doontaa. Tan sidoo kale waa in lagu xisaabtamaa marka la qaabeynayo.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay oo aan ka helno fikrado badan kan soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Farsamada gacanta On » Farshaxan iyo qalab » Xirfadaha waraaqaha » Sida looga sameeyo ubax ka sameysan warqadda loo yaqaan 'crepe paper'
Aad baan uga helay fikradan, mahadsanid
hello aad ayaad u mahadsantahay, waa wax fudud oo wax ku ool ah
Ku jawaab conchis
Aad ufudud oo qurux badan, mahadsanid
Xirfadda carruurta: Abuur koofiyad aad u gaar ah oo Shiineys ah
Sida loo sameeyo xarig furaha leh dunta funaanad dib loogu warshadeeyo funaanad